> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ka Sony Xperia Z
Maalin aan joogay aan kulan mahadnaqid qoyska oo aan Unlock Sony Xperia Z tagay miiska qolka fadhiga. Markii aan ku soo noqdey, 5 sano aan wax yar ina adeerkiis xeel ciyaarayay waxa la tirtirayaa oo si qalad ah qaar ka mid ah sawirada shakhsi. Haddii kaliya waxaa jira hab inuu ka soo kabsado photos aan la tirtiro?
Waxaa jira hal fursadii ugu dambaysay ee dib u helida sawiro aad, laakiin waxa ay ka shaqeyn doonaan oo kaliya haddii aadan overwrite xusuusta aad casriga ah ama kaarka SD. Thanks to Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) by Wondershare, aad si fudud oo wax ku ool ah soo kaban karto dib dhan snapshots aad qaali ugu click ah farta.
Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in lagu xiro aad Sony Xperia Z si aad u computer, abuurtaan Dr.Fone user-friendly ah ee software android iyo si fudud u raac tilmaamaha. Waxa aad qaadi lahayd si qallafsan ayuu 15 ilaa 20 daqiiqo u Dr.Fone si aad u samaysaan sixir, iyo halka aad ka sugi ah, sababta aan naftaada Korka koob bun ah iyo nasasho. By ka dibna, Dr.Fone u android soo kaban doontaa sawiro tirtiray ka casriga ah. Sidoo kale, la interface ka fiican fiirin nadiif ah, waxaad awoodi doontaa in aad sawirrada ku eegaan tirtiray iyo dooran oo ka mid ah aad dhabtii doonaysid inuu ka soo kabsado.
Ugu dambeyntii, oo aan ugu yaraan ka, Dr.Fone for Android iyo soo kaban karto wax badan ka badan sawiro. Waxa kale oo ay soo kaban karto, videos, music, SMS, xiriirada ...; iyo sidoo kale wax kasta oo quruxsan badan ee aad casriga ah.
Sida maahmaahdu ahayd tagaa, sawir mudan tahay in ka badan kun oo eray si aad u hesho hoos ku talaabada by tilmaamaha tallaabo inuu ka soo kabsado aad sawiro tirtiray aad Sony Xperia Z isticmaalaya Dr.Fone for Android doonaa:
Tallaabada 1. koronto ee Sony Xperia Z
Bareesada-in aad Sony Xperia Z si aad u computer Windows isticmaalaya dongle USB iyo bilowdo software Dr.Fone for Android. Marka sawirka hoos ka muuqda ilaa Dr.Fone, fadlan riix Start button.
Tallaabada 2. marin-habaabinayaan casriga ah
By ka dibna, aad casriga ah si toos ah u soo bandhigi doonaa menu soo celin. Waxaad u baahan doontaa in ay ku shaqeeyaan telefoonka adigoo raacaya edbinta ku Dr.Fone ee software android. Waxay kuu sheegi doonaan goorta iyo sida loo sameeyo.
Tallaabada 3. Scanning
Halkan ayaa ah meesha oo Sixira dhacaya, nasato oo sug Dr.Fone u android inuu shuqulkiisii
Tallaabada 4. Kulanka Xiisaha Leh ceshan photos tirtiray ee Sony Xperia Z
Haddii aad rabto in aad soo kabsado dhammaan sawiro aad, hubi in sanduuqa photos waa sax (berdaha. 1) guji soo kabsado (berdaha ahaa. 2). Haddii aad rabto in aad ku eegaan sawirada aad dooro sawir gaar ah in aad rabto in aad soo kabsado, fadlan sax sanduuqa ku xiga si ay sawir aad rabto in aad soo kabsado (berdaha ahaa. 3) iyo guji soo kabsado (2 berde.)
Ogaaw in aad xor in ay isku dayaan Dr.Fone for Android .